विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखको भनाइ चिनियाँ सामाजिक सञ्जालबाट किन हटाइयो? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखको भनाइ चिनियाँ सामाजिक सञ्जालबाट किन हटाइयो?
स्वास्थ्यखबर बुधबार, वैशाख २८, २०७९, १७:३१:००
काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघको वीबो अकाउन्टबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रियेससको एक टिप्पणी प्लेटफर्मबाट हटाइएको छ। जसमा कोरोनालाई लिएर चीनको शून्य सहनशीलता नीति टिकाउ नभएको बताइएको थियो।
चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वीबोमा यो भनाइ शेयर गरे लगत्तै पछि यसलाई हटाइएको थियो। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले यसबारे जानकारी दिएको हो।
यतिमात्र होइन एक अन्य चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म वी च्याटले राष्ट्र संघका लागि अकाउन्टबाट यस्तो खालको पोस्ट सेयरको फिचर नै हटाएको छ।
मंगलबार एक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख गिब्रयेसले भनेका थिए, 'भाइरसको व्यवहारलाई हेर्दा हामीलाई लाग्दैन कि चीनको यो नीति टिकाऊ युक्त छ।'
उता सांघाइमा बढ्दो कोरोना संक्रमितको संख्याका कारण लकडाउनलाई थप कडा बनाउँदै लगिएको छ।